About Us - Neh Industry & Varotra Co., Ltd.
ISPO Munich Jan.26 ho Jan.29, 2020, Welcome to ny trano rantsankazo C6.431-6
Miverina & Tratry Support
Yoga Blocks & andilany
Yoga ba kiraro, Bags & Hafa
FANAZARAN-TENA & Fitness
Massage Roller Hazokely
Fohy fampidirana ny Team
Tsy mijery ny R & D ekipa toy ny fampitomboana ny fahefana, foana mametraka 10% harato tombony ho any R & D, isika mijery ny tsena sy fandinihina tsara ny tsena fironana, izay miteraka be dia be ny hevitra, dia mitondra ny sasany ho mifandray amin'ny Raintsika matihanina mpanjifa manodidina izao tontolo izao. Ny sasany nanaiky ho tonga famolavolana hevitra Sketch, mifampiresaka hatrany hatrany ......, farany dia niteraka ny sary noho ny R & D ekipa, ny manaraka dia ny hanao santionany farany, Avy eo dia hankany amin'ny manaraka dingana iray- "fanamboarana"
Manana ny fanamboarana ny orinasa izay hoop Hula, vozony, ary Back fanohanana Products, Acupressure Vokatra sy ny fisaintsainana Products in Ningbo, Raha vao nandray ny baiko avy amin'ny mpanjifa, ny varotra olona dia reconfirm ny tsipiriany rehetra amin 'ny mpanjifa. Ary rehefa afaka izany, Orinasa hanao Pre-Production santionany hanomboka orinasa famokarana faobe rehefa santionany PP hamafisina. orinasa mpanamboatra ny fananana dia araka ny toetra ISO9001 rafitra fitantanana 2008, Raha mila tsipiriany momba ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny: Mandehana dingana manaraka - "kalitaon'ny fanaraha-maso"
Ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny rafitra mizara ho 3 fanaraha-maso ny kalitao ara-nofo parts- (maso alohan'ny an-trano fanatobiana entana, na ara-nofo alohan'ny famokarana), kalitao fanaraha-maso nandritra ny famokarana sy ny kalitao faobe maso aorian'ny famokarana. Ny fanaraha-maso dia tena ratsy kalitao amin'ny ISO9001 tsara rafitra fitantanana, santionany fisafoana dia araka ny AQL (Ny fanekena Quality Aza dia) 2.5 fitsipika. Ny QC hanao tatitra isaky ny fandinihana ny filaminana. Taorian'ny mpanjifa manamarina ny fandinihana ny tatitra sy noraisina ho mpikambana, dia an-tsambo izahay ny entana avy.
Ny tsara indrindra-barotra dia ny mahita ny farany mpanjifa 'tena zavatra ilaina ary mba hahita ny malaza vokatra tany an-tsena ho an'ny mpanjifa, ny ara-barotra ekipa sy ny R & D ekipa dia foana ny miara-miasa mba hanao ny zava-baovao vokatra mba hitsena ny farany mpanjifa' zavatra ilain'ny. Ny varotra olona foana manaraka ny zava-baovao hevitra sy ny vokatra avy amin'ny barotra ekipa sy ny R & D ekipa ka manosika vaovao vokatra sy ny malaza vokatra ho an'ny mpanjifa: Izahay izao dia mifantoka amin'ny professionalization sy ny fanompoana fanahy, toy izany rehefa mampiasa tenin-dreny mba hanompo ny mpanjifa . Mihevitra isika mifampiresaka tsara dia ny antsasaky ny fahombiazana.
taorian'ny asa fanompoana
Tsy mijery fanaterana rehetra tahaka ny fanombohana ny filaminana vaovao. Taorian'ny entana an-tsambo avy ihany no hanomana ny antontan-taratasy rehetra ho an'ny mpanjifa mba haka entana hampandeha tsara, ny manampy ny mpanjifa ny fomba haka ny entana raha ilaina. Aoka haniraka ny "endrika mahafa-po" ny mpanjifa rehefa afaka andro maro. Tsy mijery "Mpanjifa aloha, Contract fanahy sy ny voninahitra aloha" ho toy ny fitsipika fototra amin'ny fiaraha-mientana ifampizarana fitovian-jo, fifanajana sy ny fandraisana soa.
Ny fampidirana fohy ny marika
Ny marika "Neh" naorina tamin'ny taona 2005, ny toro lalana ny hanaovana io marika "Neh" dia fototra amin'ny Natural (Organic), Eco sariaka sy ny Fahasalamana. Ny marika "Neh" maka ny taratasy voalohany avy any Natural, Eco sariaka sy ny Fahasalamana. Isika hanao ny mari manokana ary hanao Natural, Eco Friendly sy ny vokatra ara-pahasalamana ho an'ny mpanjifa.
Ny marika "SCMO" ihany koa ny orinasa anarana, Namorona araka ny China filozofia ny "teoria momba ny dimy singa" sy "Fengshui", SCMO amin'ny teny Shinoa dia "Xun Mu", ny teny hoe "Xun" amin'ny teny Sinoa dia fa afaka mandeha na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao amin'ny asa fitoriana, ary ny asa nanirahana antsika dia ny manampy olon-drehetra kokoa salama, ny teny hoe "Mu" amin'ny teny Sinoa dia ny tokony miasa mafy sy knowhow isan'andro, dia toy izany SCMO (Xunmu) dia ny tokony miasa mafy sy knowhow isan'andro mba hanampy bebe kokoa salama vatana rehetra.
Noho ny fivoaran'ny siansa teknolojia, izao tontolo izao dia lasa kokoa mareva-doko eo amin'ny ara-nofo saha noho ny teo aloha, ny zavatra niova amin'ny sehatra maro, ny ankamaroan'ny olona efa nahazo be dia be ny tombontsoa avy amin'ny ara-batana lafiny, na izany aza, izany fifandanjan'ny eo amin'ny ara-batana lafiny sy ny saina & fanahy lafiny. Ny marika BESELF naorina hanao ny mari ary lasa mifandray vokatra mba hanampiana ny olona mba hahazo ny mahay mandanjalanja eo amin'ny lafiny ara-batana sy ny saina & fanahy lafiny.
Magic BACK MANAMPY
Miaraka amin'ny fampandrosoana ny IT, izay nanova ny ankamaroan'ny olona miasa fomba mba hipetraka ho ela ela nipetraka teo time.A mitondra ny kitapo olana noho ny hazondamosiko, Matetika isika no mahatsapa kely indray fanaintainana sy ny tendany fanaintainana, mitaiza fanaintainana ity hanimba ny fiainana tsara kokoa, izahay hanokana ny hanampy ny olona mba hanatsarana ny toe-javatra, Izany no antony ny marika "mahagaga indray fanohanana" naorina tao 2011.Now ny marika "mahagaga indray fanohanana" no voasoratra anarana ao Shina, Etazonia sy ny vondrona Eoropeana
Ny hevitry ny hoe "Eco namana" no fitsipika hanao ny mari ny vokatra ary hanao ny vokatra ary hanangana ny fatorana. Tamin'ny 2010, Nisy pilina sakafo izay nanana ny lafiny lehibe vokany. Izahay saina be dia tsara fahafahana ho antsika mba hanosika ny detachable Hula hoop, ny olona foana hoe "hihena, Use Hula hoop", fotsiny izahay efa nahazo zavatra avy amin'izany, Ka dia nanao ny marika "Weight hoop" noho ny Hula hoop .Now ny lanjan'ny hoop no voasoratra anarana ao Shina, Etazonia sy ny vondrona Eoropeana
Ny fampidirana fohy ny ekipa
Research & Development isika hijery ny R & D ekipa toy ny fampitomboana ny fahefana, foana izahay nataony 10% harato tombony ho any R & D: Izahay izao dia mijery ny tsena sy fandinihina tsara ny tsena fironana, izay miteraka be dia be ny hevitra, izahay hitondra ny sasany ho mifandray amin'ny Raintsika matihanina mpanjifa manodidina ny world.Some hevitra nanaiky ho tonga famolavolana Sketch, mifampiresaka hatrany hatrany ......, farany dia niteraka ny sary noho ny R & D ekipa, ny manaraka dia ny hanao santionany farany, avy eo dia mandeha any amin'ny manaraka dingana iray- "fanamboarana"
Manana ny ny orinasa izay fanamboarana Hula hoop, vozony, ary Back fanohanana Products, Acupressure Vokatra sy ny fisaintsainana Products in Ningbo, Raha vao nandray ny baiko avy amin'ny mpanjifa, ny varotra olona dia reconfirm ny tsipiriany rehetra amin 'ny mpanjifa, ary rehefa afaka izany, Orinasa no ho Pre-Production santionany hanomboka orinasa famokarana faobe rehefa santionany PP hamafisina. orinasa mpanamboatra ny fananana dia araka ny toetra ISO9001 rafitra fitantanana 2008, Raha mila tsipiriany momba ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny: Mandehana dingana manaraka - "kalitaon'ny fanaraha-maso"
FAQ ny orinasa
Inona avy ny vokatra lehibe sy ny tsena?
Ny lehibe indrindra dia ny vokatra hoop Hula, acupressure fandriany, lumbar fitaovana fitsaboana sy ny fisaintsainana lafika. Manana 10 taona traikefa eo amin'ny mpanamboatra sy ny fanondranana ireo vokatra. Ny vokatra sy ny tolotra dia natoky ny mpanjifa avy any Eoropa, Amerika Avaratra, Oseania sy Korea Atsimo, izay indrindra ny fivarotana lehibe mpitantana, matihanina amin'ny mpividy sy ny fahasalamana mendrika saha, ary Amazon mpivarotra.
Inona no kely indrindra dia be izay afaka hanafatra?
MOQ Miankina amin'ny inona no vokatra no liana amin'ny. Raha ny mahazatra, 50-100pcs / isan-loko ho an'ny tena vokatra dia hamolavola, raha ny customization dia tsy sarotra antsipirihany. Hiezaka izahay ny tsara indrindra mba hanohanana ny olona arovany tombontsoa ho an'ny Atrik'asa Fifanakalozana.
Inona no fonosana ve ianao manolotra & Afaka ampanjifaina?
Standard fonosana dia marika + boky fampianarana + loko boaty (na ny namany Sary boaty) + boaty baoritra. Mety ho hafa miorina amin'ny fangatahana. Ny mpamorona matihanina dia manolotra safidy maro sy ny hevi-baovao momba ny fonosana.
Afaka manome ny lisitra rehetra ny vokatra?
Eny. Manana katalaogy ny vokatra tena manokana. Faly izahay handefa anareo ny katalaogy eo amin'ny sary endrika PDF, na amin'ny alalan'ny e-mail na fampiharana ara-tsosialy.
Ve ianao manome boky fampianarana ny fomba fampiasana ny vokatra?
Eny. Afaka manolotra ny instrucion boky amin'ny fanazavana ny ny asany, fampiasana, sy ny manao ny sy ny Don'ts ho an'ny rehetra ny vokatra.
Afaka Mandidy iray na ny sasany loko namboarina?
Eny. Manana loko sasany mba ho voafidy, ary hasehoko anao ny safidy. Afaka ihany koa ny loko vaovao namboarina ho anareo. Milaza amintsika fotsiny ny isan'ny Pantone na mandefa antsika ny loko santionany.
Inona no santionany vidiny?
Faly izahay manome maimaim-poana tsy tapaka santionany iray ho anareo raha tokony handoavana ny entana sy ny fanampiny santionany. Ny sarany fanampiny dia ho voampanga ho namboarina santionany noho isika tsy maintsy manao ny solaitrabe ny teny pirinty. Afaka mandoa vola amin'ny alalan'ny PayPal na ny Shinoa sy WeChatPay AliPay manokana. Ary ny amin'ny fanaterana ny fotoana, azafady mahita ny taratasy eto ambany.
Shipping area Fotoana fanaterana ny Express
Amerika Avaratra 2 ~ 3days
Eoropa 3 ~ 5days
Oseania 3 ~ 5days
Izahay mitady GOTS voamarina fisaintsainana lafika, no manana azy io?
Eny. Ny fisaintsainana lafika nandalo ny GOTS fanamarinana. Ny vokatra rehetra dia atao amin'ny nontoxic ara-nofo. Fa ny mari-pankasitrahana Fampahalalana mikasika mahita ny taratasy eto ambany.
vaovao nomena fahefana fanamarinana patanty
ny orinasa GOTS, BSCI, ISO9000
ny vokatra Hula hoop Taona, tonga, ROHS, Azo, EN71,6P Eny
acupressure fandrianao Taona, ROHS, EN957, hahatratra Eny
mahagaga indray fanohanana AK Eny
fisaintsainana lafika ROHS, EN71, GOTS
Mandra-pahoviana no fotoana famokarana sy ny fandefasana ny fotoana ho an'ny tsirairay mba?
Efa mandeha ho azy nanavao ny tsipika ho an'ny famokarana sy ny acupressure Hula hoop fandrianao, izay be shortens ny famokarana fotoana 15 andro ho an'ny fitoeran-javatra iray 40HQ. Fa hafa famokarana vokatra ny fitsipika mitarika ny fotoana dia tokony ho 20 andro.
Destination seranan-tsambo Fotoana fanaterana ny ranomasina
Amerika Avaratra 30 ~ 50days
Oseania 13 ~ 25days
Ny fandoavam-bola ara-dalàna teny dia T / T toy ny petra-bola 30%, 70% an'i B / L dika mitovy.
Ve ianao manome fanompoana hafa?
Manana sary matihanina sy liana amin'ny ekipa lehibe sady nandroso photostudio fitaovana izay manampy ny hanome fanohanana tolotra vahaolana avo toy ny dokambarotra sary, modely sary sy lahatsary ho an'ny mpanjifa.
Contact us momba ny raharaham-barotra na ny vokatra izany natao manokana ho anao! Mifandraisa aminay
Neh (Ningbo) TAOZAVA-BAVENTY & VAROTRA CO., LTD.
OFFICE: 1502, Ningshing Building, 666 Jiangnan RD, Yinzhou District, Ningbo, Sina
Factory: No.13, Xinheng RD Yi, Private Industry Zone, Jiangbei District, Ningbo, Sina